Maxaa ka dhex guuxaya Paul Pogba? Jamaahiirta Red Devils oo ka niyad jabsan arrinta laga sheegay xiddiga reer France. – Gool FM
Man United oo ka ciribtirtay kooxda Liverpool tartanka FA Cup-ka kaddib markii ay guul kaga gaartay Old Trafford… +SAWIRRO
Barcelona oo guul loo baahnaa ka gaartay Elche ciyaar uu si wanaagsan kaga dhex muuqday Frenkie de Jong
Maxaa ka dhex guuxaya Paul Pogba? Jamaahiirta Red Devils oo ka niyad jabsan arrinta laga sheegay xiddiga reer France.
Abdirashid Mohamud July 20, 2019
(England) 20 Luulyo 2019. Waxaa lagu soo warramayaa in kubad sameeyaha Manchester United Paul Pogba uu wali sugayo inuu ku biiro Real Madrid maadaama uu doonayo inuu ka hoos shaqeeyo Zinedine Zidane.
Xiddiga reer France ayaa dib ugu soo laabtay Red Devils sanadkii 2016 kadib markii uu 4-sano dahabi ah kusoo qaatay koxoda Bianconerri, balse mudooyinkii ugu dambeeyay xiddigaan heerka caalami iyo wakiilkiisaba waxey si isku mid ah uga dhawaajiyeen iney tahay waqtigii uu xiddigaan meel kale naftiisa ku tijaabin lahaa.
Red Devils wey ka caga-jiideysaa iney iibiso xiddiga heerka caalami kaas oo heshiiskiisa uu dhacayo 2021, balse waxey durba ku fakareysaa qorshe ay koox walba ku weydiisaneyso 170 Malyan oo Pound hadii ay ku guuldareysato iney xiddigaan ku qanciso sii joogista Old Trafford.
Mirror ayaa fahamsan in Paul Pogba uu wali sugayo taleefoon kaga yimaada Los Blancos, sababtoo ah wuxuu aad ugu rajo weyn yahay mar uun inuu la shaqeeyo halyeeyga wadankiisa Zinedine Zidane.
Paul si joogto ah ayuu kaga soo muuqanayaa kulamada fasaxa ee kooxdiisa, wuxuuna wacdaro dhigay saddexdii kulan ee ay ciyaareen.
Dhanka kale Madrid waxaa saaran culeys weyn maadaama ay ku qasban tahay iney ciyaartoy dhawr ah iibiso hadii ay dooneyso iney soo xerogaliso Paul Pogba.
Ugu dambeyntiina Jamaahiirta Red Devils waxey noqdeen kuwa ka daalay wararka xanta ah ee Paul, waxeyna markaan doorbidayaan iney arkaan kaliya waxa dhacaya, walow ay u riyaaqeen bandhigii uu galabta ka sameeyay kulankii ay kooxda 1-0 kaga adkaatay Inter Milan.
Muxuu ka yiri Frenkie de Jong heshiiska uu Matthijs de Ligt ugu biiray kooxda Juventus?